ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 46.4 ဘွားတင်ဆီက ရတဲ့ အမွေ
အဘွားက သူ့ကိုဘယ်သူက၊ ဘယ်လိုပြုစုတယ်ဆိုတာလည်း၊ သိတယ်နော်။ သေးတွေဒီလောက်ပေါက်နေတဲ့ကြားက၊ ကိုနဗနမှာ၊ ပုဆိုးအသစ်လိုနေပြီဆိုတာလဲ၊ သူသိတယ်။
အဲသလို ၀န်ခံစိတ်ရဲရဲ နဲ့ ဟန်တွေ ဖယ်ပြီးရေးတတ်တဲ့ ၊ နောက်ပြီး အကို့စိတ်ထားကို ကျနော် သဘောကျတယ် ။ တချို့တချို့တွေနဲ့တော့ ကွာပဗျာ ။
comments အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါ.. အချိန်ရတာနဲ့.. ရည်ရွယ်ရင်းအဖေ့အကြောင်းလေး.. ရေးပါ့မယ်..။
အရမ်းဖတ်ကောင်းပါတယ် အကုန်ကုန်ပီးအသစ်တင်တိုင်းလည်းဖတ်ပါတယ် Bro
ပို့စ်တိုင်းကို သဘောကျတယ်ဗျာ..ကျွန်တော် ဟိုးးးးးအရင်ကတည်းက Bro ဘလော့ကိုလာဖြစ်ပါတယ်။
အကိုရေ စာတွေ ဖတ်ပြီး ပီတိတွေ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီမှာဆို အသက်ကြီးလို့ အပစ်ပယ်ခံနေရတာတွေ မြင်ရတော့ အရမ်းဝမ်းနဲမိတယ်။ အခု အကိုစာလေးတွေ ဖတ်လိုက်ရတော့ ပေါ့ပါးသွားတယ်ဗျာ ကျေးဇူးပါ
နောက်ဆုံးအပိုဒ်လေး ဖတ်ပြီး မျက်ရည်တောင် ၀ိုင်းတယ်
အရှိကိုအရှိအတိုင်း ရိုးသားစွာရေးတတ်လွန်းတဲ့ ကိုနဗနကို လေးစားမိပါတယ်… ကိုနဗနတို့ မိသားစုလေး နှစ်သစ်မှာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ …
ကိုနဗန...ခင်ဗျားစာတွေကို စာအုပ်ထုတ်ပါလားဗျာ။ ဒါမှမဟုတ် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ပါစေချင်ပါတယ်။
စကားမစပ် ခင်ဗျား facebookရော ၀င်သေးလား။
when I come and see your block, you always wirte about yourself, i no like this condition, i think that u did ur block to write urself only. I no interest about yourself.
အဲဒီလို အဘွားတစ်ယောက် အခုထိ ကျနော့်မှာ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီလောက်ထိတော့ မပြုစုခဲ့ရပါဘူး။ ညီမတွေ ရှိနေလို့ သူတို့က အဓိက ပြုစုကြတယ်။ စိတ်အလိုရှိရင် ဟိုးအရင်ကတည်းက သူသိမ်းထားတဲ့ ၁၀ တန်အဟောင်းလေးထုတ်ပြီး အမွေဆိုပြီး ပေးဖူးတယ်။